Semalt: Indlela yokukhusela amawebhusayithi kwi-Chrome kunye ne-4 Izandiso
iiwebhsayithi ezikhuselayo zinokuba ngumlinganiselo onobulumko kwiintlobo ezahlukeneyo zabasebenzisi be-intanethi. Kukho iindlela ezininzi abantu abavimbela amawebhusayithi kwiikhomputha zabo. Ngokomzekelo, abantu bayatshintsha imikhosi yefayile kumashishini ukuze baqondise kwii-URL ezingaziwa. Abanye abantu basebenzisa ii-DNS ezicacisiweyo eziye zazakhela ukulawulwa komlilo. Kwezinye iifayile, ungathanda ukuvimba ezinye iiwebhsayithi kwinqanaba lomkhangeli - argo casino no deposit bonus. Kukho iindlela ezininzi ezinokuthi ungavimba amawebhusayithi kwisiphequluli sakho, ezininzi zazo zibandakanya izandiso.
Kule nqaku ye-SEO, u-Igor Gamanenko, ingcali ephezulu Semalt , unika apha ezinye zezandisi ze-Chrome ezongezelelekileyo ezingakuvimbela amawebhusayithi ziquka:
1. I-Blocklist yoBuntu (nge-Google)
Le addon inokubangela isiphequluli ukuba ivimbele iiwebhusayithi ukususela kwimpendulo yombuzo wokufuna. Uluhlu lweBlocklist Ulwandiso lwenziwa yinkampani yeGoogle, ebonisa ukufaneleka kwayo. Emva kokufakela olu kongezwa, unako ukukhusela i-website ngqo kwimiphumo yophando yelo bhsayithi. Unokwenza uludwe lwemida kunye namasayithi ofuna ukuwavimba kwi-Google SERPs. Ukulawula ezi ziza, unokuklibanisa isandiso soBloki lwaBantu kwaye ususe iiwebhusayithi ezikhoyo kwiluhlu lwakho lokuvimba.
2. Vimba indawo
Olu longeza lunceda umsebenzisi ukuvimba uluhlu oluthile lwewebhusayithi ofuna ukuyivimba. Ngokungafani nokwandiswa koLondolozo lwaBantu, kufuneka udibanise ngesandla iiwebhsayithi ozicwangcisayo g ukuba uzivimbele..Olu lwandiso lunalo iphasiwedi engayifaka kwi-lock child. Unokuthintela ukusetyenziswa okungadingekile ukusuka apha. Emva kokufakela, unako ukulawula i-Block Site Extension ngokuchofoza uphawu lwalo kwisikrini. Ungayilungiselela okanye uyisuse apha.
Ukongezwa kwe-Chrome kubhlokole ezinye iiwebhsayithi ngokukuvumela ukuba usethe ixesha leseshoni. Ngokomzekelo, ungasetha inani lexesha ofuna ukuyisebenzisa kwiziko elithile. Le addon yenza ukuba kube nokwenza uluhlu lwewebhusayithi ofuna ukuyivimba. Ungasebenzisa inketho yeNyukliya ukuvimba ukufikelela kwiwebhusayithi ngokupheleleyo.
Esi sixhobo siza sikhululekile. Inika iinkonzo ezininzi zokujonga i-intanethi kwi-intanethi. I-TinyFilter inokukunceda umsebenzisi ukukhusela umxholo okhuselayo ukusuka ekuboniseni kwisiphequluli sekhompyutha. Kukho iphasiwedi yokuvala izitshixo zomlilo kunye nokulawula kwabazali iinkalo zesiphequluli. Unokukhawulela ukufikelela kule addon usebenzisa iphasiwedi, ukunciphisa amaqela angayilungisa. Ifom ye menu yayo yokukhetha; unqakraza uphawu lwebhrawuza ukulawula i-website evinjiweyo ngesandla.
Unokungena ekulawuleni ukufikelela kwesiphequluli usebenzisa iindlela ezininzi. Enye yeendlela eziphambili zokulawula isiphequluli sakho se-Chrome kukungena kwizandiso. Izandiso zesiphequluli ezinjenge-Block Help site ukukhawulela ukufikelela kwezinye ii-URL ukusuka kwisiphequluli sakho. Ngokomzekelo, unokwenza uluhlu lwewebhusayithi ongafuni ukutyelela. Kwakhona kunokwenzeka ukuzenzekelayo ezinye iiphasiwedi kulezi zandiso ukukhusela abantwana ekubeni bangenzi izizathu. I-article ye-SEO inokukunceda ufake ifayile ye-chrome engcono yokulawula ukufikelela kwiwebhusayithi kwisiphequluli sakho se-Chrome.